आजदेखि भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान शुरु, क-कस्ले पाउँदैछन् खोप ? खबरमञ्च
३ माघ, खबरमञ्च, at 7:27 AM
By खबर मञ्च / January 16, 2021 / Comments Off on आजदेखि भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान शुरु, क-कस्ले पाउँदैछन् खोप ?
बिर्तामोड । आजदेखि भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउने अभियान शुरु हुँदैछ।
जस्का लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको भारतले जनाएको छ।
चीनपछि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको लगाउने अभियान शुरु गर्न लागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
भारत सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरु अर्थात् डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका मानिसहरुले कोरोना खोप पाउनेछन्।
सबै सरकारी र निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या ८० लाखदेखि एक करोडसम्म रहेको बताइएको छ। त्यसपछि करिब दुई करोड फ्रन्टलाइन वर्कर्स अर्थात् प्रहरी, सेना, स्यानिटाइजेसन कर्मचारीहरुलाई कोरोना खोप दिइनेछ ।
भारतको ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डिया (डीसीजीआई)ले कोरोनाका दुई खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ -कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोरोना खोपको भारतीय संस्करण कोभिसिल्ड हो । यो खोप भारतमा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको छ । कोभ्याक्सिन भारत बायोटेकले विकास गरेको कोरोना खोप हो ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक करोड १० लाख डोज कोभिसिल्ड र ५५ लाख कोभ्याक्सिन खोप खरिद गरिसकेको बताएको छ । भारतले आगामी जुन महिनासम्म ३० करोड मानिसलाई कोरोना खोप दिने लक्ष्य राखेको छ ।
Published: 1 month ago on January 16, 2021
Last Modified: January 16, 2021 @ 5:36 pm
नेपालले दियो कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई आपतकालिन प्रयोगको अनुमति
२६६ जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप ५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
प्रधानन्यायाधीश राणा अमेरिका जाँदै